Amaphupho ngomsebenzi nesikole – iAfrika
Uma uphupha ukuthi useyunivesithi/ usenyuvesi kusho ukuthi uhlakaniphile kakhulu futhi kufanele uzame ukusebenzisa amathalente akho emsebenzini wakho. Amaphupho ngesikole. Amaphupho ngezivivinyo. Amaphupho ngemfundo.
Tags Amanyuvesi, Inyuvesi
Amaphupho ngepeni noyinki
Uma uphupha ukuthi ubhala ngamapeni noyinki kusho ukuthi kufanele uqaphele ukungazikhandli kakhulu ngomsebenzi wakho wesikole. Amaphupho ngesikole. Amaphupho ngezivivinyo. Amaphupho ngemfundo.
Uma uphupha ukuthi uthole iziqu noma uyagreda kodwa ungesona isitshudeni kusho ukuthi uhlakaniphile kodwa umosha ithalente lakho. Amaphupho ngesikole. Amaphupho ngezivivinyo.
Amaphupho ngokukhushulwa emsebenzini
Uma uphupha ukuthi ukhushuliwe emsebenzini uzophumelela emsebenzini wakho. Amaphupho ngomsebenzi. Amaphupho ngomqashi. Uma uphupha ukuthi uyaqhuga.
Uma uphupha ukuthi unikezwe umsebenzi omkhulu uzohlangabezana nezinkinga maduzane futhi kuzofanele usebenze kanzima uma ufuna ukuphumelela. Amaphupho ngokukhushulwa emsebenzini. Amaphupho ngomqashi.
Uma uphupha ubona umqashi wakho kusho ukuthi uzoba nezinkinga emsebenzini uma ungaqapheli ukuthi wenzani. Amaphupho ngomsebenzi. Amaphupho ngokukhushulwa emsebenzini.